Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Cuba Iindaba Eziphambili » Uhambo olutsha lwaseCuba: Akukho kuvalwa, akukho mvavanyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Cuba Iindaba Eziphambili • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
ICuba yatyhalela ekuvuleni kwakhona kukhenketho kunye nokubuyisela umsebenzi ongenayo kulindelwe ukuvulwa ngokusemthethweni kwemida nge-15 kaNovemba.
Urhulumente waseCuba uphakamise uxanduva lokuvalelwa bodwa kubahambi bamazwe aphesheya ukuqala nge-7 kaNovemba.
Oku kuqinisekiswe nguMphathiswa wezoKhenketho uJuan Carlos García namhlanje ngexesha lenkomfa yeendaba eHavana malunga nokulungiswa kwecandelo lokuvulwa ngokusemthethweni.
Ukuvulwa kwakhona “okulawulwayo” kweenkonzo zabakhenkethi kusabela kwisantya sokugonya ngokuchasene ne-COVID-19 elizweni.
UMphathiswa ukwabonise ukuba imfuneko yokungenisa uvavanyo lwe-PCR olunegative kwabo bafikayo nakwesiphi na isikhululo seenqwelomoya kwesi siqithi nayo iyakuphakanyiswa ukusuka kumhla we-7, nangona kufuneka babonise ukuba baye bagonywa ngalo naluphi na ugonyo olugunyazisiweyo lwe-WHO.
Abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-12 akusayi kufuneka beze naluphi na uvavanyo lwe-PCR okanye iskimu sokugonya xa befika kweli lizwe. Urhulumente, uMphathiswa ucacise, usaza kugcina uphononongo lwe-epidemiological, kunye nokusetyenziswa okunyanzelekileyo kweemaski kwiitheminali nakwilizwe liphela.
Tyhubha yamisa iinqwelomoya zorhwebo kunye neenqwelomoya ngo-Epreli 2020. Ngo-Okthobha waloo nyaka, yaphinda yavula izikhululo zeenqwelomoya zayo, kodwa ngokuncipha okuncinci kweenqwelo moya ezisuka eUnited States, Mexico, Panama, Bahamas, Haiti, Dominican Republic, naseColombia.
Ngokuphathelele ukuhamba ukusuka e-Italiya, iCuba ifumene ukukhanya okuluhlaza nguFarnesina, uMphathiswa weMicimbi yezaNgaphandle yase-Italiya, kuluhlu "E", olubandakanya amazwe apho umntu unokuhamba kuphela ngenxa yezizathu zomsebenzi kunye nokungxamiseka komntu kodwa kungekhona ngenxa yokhenketho. . Ummiselo owabangela ukuba kuhlelwe kwahlulwa waphela ngo-Oktobha 25, usuku olwalunokutshintsha ngalo iwonga lamazwe ahlukahlukeneyo kubulungiseleli bamazwe ngamazwe.
Izinga lokugonyelwa i-COVID-19 eCuba Kulindeleke ukuba ifike ngaphezulu kwe-90% yabemi ngoNovemba.
Phambi kobhubhane, ukhenketho ibingumthombo wesibini osemthethweni waseCuba wengeniso yotshintshiselwano lwangaphandle kwaye inegalelo elimalunga ne-10% yesambuku semveliso yangaphakathi (GDP).